Nhau - Kufamba kukuru kuenda kuKorea.
Kufamba kukuru kuenda kuKorea.
Kuti ushandise mamiriro emakambani, nakidzwa nemuviri nepfungwa dzevashandi, kunatsiridza hupenyu hweamateur hwevashandi, simbisa kutaurirana pakati pevashandi, Shandong HUIYANG INDUSTRY CO., LTD akaronga chikamu chevashandi vedu kunyanya vashandi vanobva kudhipatimendi rekutengesa kuti vashanyire South Korea muna Mbudzi. Rwendo rwacho rwakanga rwakanyatsogadzirirwa nekambani uye rwakanga rwakarongeka uye rwakasununguka Wese munhu anotamba zvakanyanya, rega muviri nepfungwa zvinyatso zorora, kubva kwazviri kudzidza nezve tsika dzeKorea, jogirafi, tsika tsika, tsika dzevanhu, asi zvakare vakaravira chikafu cheKorea chakasiyana. Autumn Tour chiitiko chegore chakarongedzwa nekambani. Kuvandudzwa kwezviitiko mukuvandudza hupenyu hwenguva-pfupi yevashandi, kuunganidza kushingairira kwevashandi, simbisa kutaurirana pakati pevashandi, kusimudzira kuziva kwechikwata kwakaita basa rakanaka mukusimudzira.
Munguva yerwendo urwu, takashanyirawo vatengi vekambani yeKorea pamwe chete. Akashanyira yemuenzaniso yemutengi mukamuri uye fekitori, uye akaita musangano wehukama uye kutaurirana nemutengi. Kunzwisisa kuri nani nhoroondo yekambani yemutengi, kukura trajectory, gwara rekuvandudza uye ramangwana rekuvandudza zvinangwa. Rwendo urwu zvirinani kudhonzwa kuenda kure pakati pedu nevatengi, mativi ese ave kunzwisisa zviri nani, iri kukunda-kuhwina mamiriro.
South Korea ndiyo muvakidzani wedu wepedyo uye nyika ine mikana yakawanda yemusika, uye muna 2018 yakasvika chinyararire munzvimbo yechishanu mumusika wepasi rose wee-commerce. Mushure mekushanya uku uye kuongorora kwakadzama uye kutsvagisa, takaona kuti kune ruzivo zvakare rwekuwedzera bhizinesi kuKorea. Pasi pesimba rekuputika kwekorona nyowani, bhizinesi repasirose rakaderera, asi bhizimusi repamhepo riri kuwedzera, mukana wakakura. Tinofanira kushandisa zvakanaka mukana uno kuvhura musika weKorea uye nekukudza chiyero chebhizinesi.